50,000 tani remubatanidzwa fetiraiza kugadzirwa mutsetse - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Fetereza yemubatanidzwa, inozivikanwawo semushonga wemakemikari, fetiraiza ine chero maviri kana matatu manyowa ezvehutano hwezvirimwa, senge nitrogen, phosphorus uye potasium, inogadzirwa nemakemikari maitiro kana nzira dzekuvhenganisa; fetiraiza yemubatanidzwa inogona kunge iine upfu kana granular. Fetereza yakasanganiswa ine zvakakura zvinoshandiswa, iri nyore kunyungudika mumvura, inoora nekukurumidza, uye iri nyore kutorwa nemidzi. Naizvozvo, inonzi "fetiraiza inokurumidza-kuita". Basa rayo kusangana nezvinodiwa zvakakwana uye chiyero chezvakasiyana zvinovaka muviri munzvimbo dzakasiyana dzekugadzira.
Mutsetse wepagore wekugadzira wematani zviuru makumi mashanu emubatanidzwa fetereza mubatanidzwa wemidziyo yepamberi. Mari yekugadzira haina kukwana. Remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara inogona kushandiswa kune granulation yezvinhu zvakasiyana siyana zvinoumbwa mbichana. Chekupedzisira, komputa yemanyowa ine huwandu hwakasiyana uye mafomula inogona kugadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa, kunyatsozadza zvinovaka muviri zvinodikanwa nezvirimwa, uye kugadzirisa kupokana kuri pakati pekudiwa kwezvirimwa nekuwanikwa kwevhu.
Chinoumba Fertilizer Production Line inonyanya kushandiswa kugadzira mafotireza emakomputa emhando dzakasiyana dzakadai se potassium s nitrogen, phosphorus potassium perphosphate, potassium chloride, granular sulfate, sulfuric acid, ammonium nitrate uye mamwe mafomula akasiyana.
Seunyanzvi hwekugadzira fetereza yekugadzira tambo michina, isu tinopa vatengi zvigadzirwa zvekugadzira uye mhinduro yakakodzera kwazvo kune akasiyana magadzirirwo emagetsi anodikanwa senge matani zviuru gumi pagore kusvika kumatoni mazana maviri ezviuru pagore. Iyo yakazara seti yemidziyo inoenderana, inonzwisisika uye yesainzi, ine yakagadzikana mashandiro, yakanaka simba-yekuchengetedza mhedzisiro, yakaderera yekugadzirisa mutengo uye nyore kushanda. Ndiyo sarudzo yakanakisa yekugadzira fetiraiza (yakasanganiswa fetiraiza) vagadziri.
Musanganiswa wekugadzira fetereza unogona kuburitsa fetereza yakakwira, yepakati uye yakadzika yemubatanidzwa kubva kuzvirimwa zvakasiyana. Kazhinji kutaura, fetiraiza yemubatanidzwa ine maviri kana matatu zvinovaka muviri (nitrogen, phosphorus, potasium). Iine hunhu hwehuwandu hwemuviri yezvakanaka uye mashoma mhedzisiro. Fetereza yemubatanidzwa inoita basa rakakosha mukudyara kwakaringana. Izvo hazvigone chete kugadzirisa kuvandudza kushanda, asi zvakare kusimudzira yakagadzikana uye yakakwira goho rezvirimwa.
Kushanda remubatanidzwa fetiraiza dzaFord:
1. Kugadzira maitiro esarufa-baged urea.
2. Nzira dzakasiyana dzekugadzira dze organic uye inorganic komputa fetiraiza.
3. Acid nzira yefetiraiza.
4. Hupfu hwemaindasitiri husina kugadzirwa nefotereza.
5. Makuru-ane hura urea yekugadzira maitiro.
6. Kugadzira nzira yematrice fetiraiza yemichero.
Mbishi zvigadzirwa zvinowanikwa kune organic fetiraiza kugadzirwa:
Izvo zvakasvibirira zvemubatanidzwa wefetireza yekugadzira mutsara ndeye urea, ammonium chloride, ammonium sulphate, mvura ammonia, ammonium phosphate, diammonium phosphate, potasium chloride, potasium sulphate, kusanganisira mamwe mavhu uye mamwe mafirita.
Anoumba manyowa kugadzirwa mutsetse muhombe dhiramu granulation iri ainyanya kushandiswa kugadzira mukuru-wevasungwa remubatanidzwa fetiraiza. Round dhisiki granulation inogona kushandiswa kuburitsa yakakwira- uye yakaderera-yevasungwa mukomboni fetiraiza tekinoroji, inosanganiswa nekomboni fotereza inopesana neyakaunganidzwa tekinoroji, yakakwira-nitrogen mukomboni fetiraiza yekugadzira tekinoroji, nezvimwe.
Mukomboni fotereza yekugadzira mutsara wefekitori yedu ine zvinotevera hunhu:
Mbishi zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya: komputa fotereza inogona kugadzirwa zvinoenderana nenzira dzakasiyana uye huwandu hwecomputer fetiraiza, uye zvakare akakodzera kugadzirwa kwe organic uye inorganic komputa fetiraiza.
Iyo shoma idenderedzwa chiyero uye biobacterium goho rakakwirira: iyo nyowani maitiro inogona kuwana iyo idenderedzwa chiyero cheanopfuura 90% kusvika 95%, uye yakaderera-tembiricha yemhepo yekuomesa tekinoroji inogona kuita kuti hutachiona hwehutachiona huwane mukana wekupona unopfuura 90%. Chigadzirwa chakapedzwa chakanakisa pakuonekwa uye kunyangwe muhukuru, 90% yacho iri zvidimbu zvine saizi yesendi ye2 kusvika 4mm.
Maitiro evashandi anochinja-chinja: maitiro eiyo komputa yekudyara tambo yekugadzirisa inogona kugadziriswa zvinoenderana neicho chaicho mbishi zvigadzirwa, fomula uye saiti, kana maitiro akagadziriswa anogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Chiyero chemuviri wezvakapedzwa zvigadzirwa chakatsiga: kuburikidza otomatiki kuyerwa kwezvinhu, chiyero chaicho chezvakasiyana-siyana, zvinwiwa uye zvimwe zvigadzirwa, zvichingoda kuchengetedza kugadzikana uye kushanda kweumwe neumwe muviri mune zvese maitiro.
Maitiro kuyerera kweakaunganidzwa manyowa ekugadzira mutsetse kazhinji anogona kuve akapatsanurwa kuita: mbishi zvinhu zvinoshandiswa, kusanganisa, kupwanya ma nodule, granulation, kuongorora kwekutanga, kuyanika kwetembudzi, kutonhora kwetembere, kuongorora kwechipiri, kupedzisa kudhiraina, uye kuputira kwehuwandu hweakapedza zvigadzirwa.
1. Zvinhu zvakasvibirira zvinoshandiswa:
Zvinoenderana nezvinodiwa pamusika uye mhedzisiro yevhu yemuno mhedzisiro, urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, heavy calcium, potasium chloride (potassium sulphate) uye zvimwe zvinhu zvakasvibirira zvinogoverwa mune chimwe chikamu. Additives, trace element, nezvimwewo zvinoshandiswa sezvinhu zvinosanganiswa mune chimwe chikamu kuburikidza nezviyero zvebhandi. Zvinoenderana neiyo muyero wefomula, zvese zvakasvibirira zvinhu zvinosanganiswa zvakaenzana kubva pamabhanhire kuenda kuvasanganisi, maitiro anonzi premixes. Iyo inovimbisa iko kurongeka kwekuumbwa uye inowana inoshanda inoenderera zvigadzirwa.
Izvo zvakagadzirwa mbishi zvigadzirwa zvakasanganiswa zvizere uye zvinomutsirwa zvakaenzana, nekuisa hwaro hwepamusoro-hunyanzvi uye hwemhando yepamusoro granular fetiraiza. Musanganisi wekutwasuka kana musanganiswa wedisiki unogona kushandiswa kuyunifomu yunifomu uye nekumutsa.
Mapundu ari muzvinhu akapwanywa mushure mekusanganisa zvakaenzana, izvo zviri nyore kune inotevera granulation kugadzira, kunyanya kushandisa cheni crusher.
Izvo zvinhu mushure mekusanganisa zvakaenzana uye zvakapwanyika zvinotakurwa kuenda kumuchina wegranulation kuburikidza nebhandi rinotakura, inova chikamu chepakati chemutsara wekugadzira fetereza mutsara. Sarudzo yegranulator yakakosha kwazvo. Yedu fekitori inogadzira diski granulator, dhiramu granulator, roller extruder kana remubatanidzwa fetiraiza granulator.
Iwo ma particles anosvinudzwa, uye iwo asina kukwana masende anodzoserwa kumusoro kwepamusoro kusanganisa uye inomutsa chinongedzo chekugadzirisa zvakare. Kazhinji, roller roller sieve inoshandiswa.
Maitiro aya anotora otomatiki huwandu hwekupakata muchina. Muchina uyu unogadzirwa nemuchina wekuyera wega, wekutakura system, wekuisa chisimbiso, nezvimwe. Unogona zvakare kugadzirisa hoppers zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Inogona kuona kuwanda kuputira kwehuwandu hwezvinhu zvakadai se organic fetiraiza uye komputa fetiraiza, uye yave ichishandiswa zvakanyanya mukugadzira chikafu mafekitori uye emabhizimusi ekugadzira mitsara.